Njide ndị ahịa dị mma maka azụmahịa. Ịzụlite ndị ahịa bụ usoro dị mfe karịa ịdọta ndị ọhụrụ, na ndị ahịa nwere afọ ojuju na-enwekarị ike ịzụrụ ihe ugboro ugboro. Ịnọgide na-enwe mmekọrịta siri ike nke ndị ahịa ọ bụghị naanị na-erite uru n'ala ala ụlọ ọrụ gị, mana ọ na-ewepụkwa mmetụta ụfọdụ a na-enwe na iwu ọhụrụ na nchịkọta data dịka mmachibido iwu Google na kuki ndị ọzọ. Mmụba 5% na njide ndị ahịa na-ejikọta ma ọ dịkarịa ala mmụba 25%.
Etu ị ga - esi wulite omenaala na - eme ka Companylọ Ọrụ Gị Dịkwuo Ala
Friday, April 9, 2021 Friday, April 9, 2021 jeff agba
N'afọ gara aga nwere ihe metụtara ọrụ niile, ọ ga-abụ na ị nọ na njedebe nke ịsọ asọmpi. Site na ngalaba CMO na ngalaba azụmaahịa na - agbake site na otu afọ iji kwụghachi azụ, ebe ị na - etinye dollar ị na - azụ ahịa n’afọ a nwere ike itinye gị n’ahịa gị. Ugbu a bụ oge itinye ego na ngwọta ziri ezi na-eduga na teknụzụ iji mepee echiche ahịa dị mma. Ọ bụghị ebe a na-ejikọta ọnụ ọnụ ụlọ nke ihe ndị e ji adọpụ ọnụ na-ahọrọ agba ndị ahọrọ tupu ha esee (azịza ha agaghị adị),
Wednesday, April 7, 2021 Wednesday, April 7, 2021 Rayaprolu na -adịghị ahụkebe